Fanamboaran-jiro manga vita amin'ny metisy sy mpaninjara metaly - China Factory - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fitaovana metaly > Toro-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny metisy
Mpanjifa mpamokatra & amp; Mpanafika varahina, fantsom-basy, bozaka varahina, vatofantsika mpanamboatra, fitaovana varahina, mpanamboatra varahina, varahina varahina, fitaovana elektronika varahina, fantsom-pitaovana varahina, fantson-tsofoka varahina, fantson-tsofoka varahina, varahina varahina, Ny karazan-tsoavaly vita amin'ny varahina, ny bobongolo tena izy, ny famahanana, ny tsikombakomba, ny tsy mifandanja, izay ampiasaina amin'ny fiara, fitaovana elektronika, fitaovana an-tokantrano, fitaovana sy fitaovana ary sns.
Product Introduction of the Tassel Compression Tray with Thread Metric
Ny tee, ny fatorana mahazatra indrindra, dia ampiasaina mba hampifandimbiasana (na fizarana) ny fluid flow. Izy io dia misy sifotra hoditra, fantsom-podiarana solventso na fanoherana ny solvento-boribory ary sarin'akanjon'ny vehivavy. Ny tehezanao dia afaka mampifandray tapakila amin'ny diam-pandrefesana samihafa na manova ny tari-dalan'ny pipa, na ny roa. Azo ampiasaina amin'ny fitaovam-pandaharana maro sy ny endriny, azo ampiasaina ihany koa izy ireo mba handefa roapolo misy rano. Ny tees dia mety mitovy na tsy mitovy amin'ny haben'ny fifandraisana telo amin'izy ireo, miaraka amin'ny tees mitovy ny mahazatra indrindra.
Product Parameter momba ny fametahana kofehy brass miaraka amin'ny metrisy
1/2 '' amin'ny 2 ''
DIN, ANSI, ASTM, JIS, GB, ISO, IFI, tsy marim-pototra
150 PSI fara-fahakeliny
Hatramin'ny -20 ° C hatramin'ny 110 ° C
Ny vy ny alika, ny vy, Carbon Steel, varahina, varahina, sns.
Nolokoina (maro ny loko), dacromet, zinc plated, nickle Alloy plated, polishing
Fitaovana fanondranana entana, Carton, hazo palettes na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa
30% T / T mialoha, 70% mandanjalanja mialoha ny sambo. Manao handefasana entana mandritra ny 5-7 andro aorian'ny nahazoanay ny vola feno amin'ny Sailing Date
Ny endriky ny fitaovana sy ny fampiharana ny fametahana kofehy brass miaraka amin'ny metrisy
1.Materials: fitaovana matihanina miaraka amin'ny mari-pitsipika ara-materialy, izay mety ho karbonina karbon, vy na stainless, etc.
2.Machines: manamboatra 40 karazana CNC mozika avo lenta, izay mahatonga ny fitaovana hoenti-manana tsara.
3. fomba famolavolana: ny fomba famokarana mety, izay miantoka ny lozam-barotra ambany sy ny vidin'ny fifaninanana.
4. Fitsipika: hentitra araka ny fenitra iraisam-pirenena mahazatra, izay mety ho JIC, DIN, Metric, BSP, NPT, sns.
5.Invispection: manara-maso ny fidirana amin'ny kaonty, fanamarinana ny tranonkala ary ny fanaraha-maso ny vokatra fanokafana voalohany, ho an'ny 100% fikarakarana alohan'ny fifangaroana, izay mahatonga ny fitaovantsika ho afaka amin'ny fahalotoana, sombina, na rantsana maranitra, sns.
6.Package: trangan'ny trangam-pako efa hatry ny ela.
fampiharana:pifaneraserana, fitaovana fiara, kamiao ary fiara amin'ny fiara, sehatra indostrialy, fitaovana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fitaovam-pitrandrahana any ivelany, toeram-pambolena sy fitaovam-pambolena, sns.
Toro-hevitra momba ny vokatra vita amin'ny kofehy brass miaraka amin'ny metisy
Packaging Details:Standard package, Carton, hazo pallet na mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Hot Tags: Fitaovam-panorenana vita amin'ny varahina, metisy, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any China, mividy, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, haingana, vidin'ny vidin-tsolika,
BSP lahy lahy teatra tepe BSPTMiaraka amin'ny foibe malezin'ny lahyTaolam-paty malefaka